FreeOffice 5.2.7 ichave yekupedzisira vhezheni yeOfreeOffice 5.2.X | Linux Vakapindwa muropa
FreeOffice 5.2.7 ichave yekupedzisira vhezheni yeOreOffice 5.2.X
Mushure mekuburitswa kweLibreOffice 5.3 zuva rekupedzisira 2, inguva yekuonekana kwese yapfuura vhezheni, vhezheni 5.2. Nhasi kudzokororwa kwekupedzisira kweshanduro iyi kwabuda, iri 5.2.7 vhezheni yekupedzisira inotakura iyo nhamba 2 kuseri kwe5 muLibreOffice.
LibreOffice 5.2.7 vashandisi ivo vachakwanisa kunakidzwa nerutsigiro kusvika June 4, ndiko kuti, vane isingasviki mwedzi mumwe wekutsigira yasara neiyi vhezheni. Mushure mezuva iro ivo vanofanirwa kugadzirisa yavo vhezheni yeLibreOffice kuti ive vhezheni 5.3 uye neshanduro dzinobuda gare gare.
Chii chitsva mushanduro 5.2.7 zvine chekuita ne 5.2.6 ingori kururamisa kwetsikidzi dzakawanikwa mushanduro dzakapfuura. Pakazara, zvingangoita makumi mana nematatu bugs zvataurwa, izvo zvakagadziridzwa zveiyi vhezheni nyowani.
Kukundikana uku hauna kugadziriswa usiku humwePanzvimbo iyoyo, maviri mavhizimusi vhezheni anga achidikanwa kuti agadzirise zvese izvi zvipembenene izvo zvave zvakaonekwa, zvinova zvichave zvipembenene zvekupedzisira zvakagadziriswa mune 2.X dzakateedzana.
Kana vhezheni isisiri kutsigirwa, kuona kutadza, bugs uye matambudziko ekuchengetedza anomiswa zvakare kugadziriswa. Nechikonzero ichi, haufanire kushanda munzvimbo yakakosha yebasa, sezvo kukundikana kuchikonzera kuti urasikirwe nebasa rakakosha kana kukanganisa kukanganisa kwekushandisa kwako.
Pakazosvika June 4, Ini ndinokurudzira kuvandudza kune yazvino vhezheni yeLibreOffice, iyo ine zvimwe zvakakosha zvinhu zvitsva uye ndiyo yakanakisa vhezheni yeLibreOffice kusvika zvino. Parizvino vhezheni yazvino ndeye 5.3, kunyange hazvo shanduro nyowani dzaigona kubuda mumwedzi. Chero chii chinoitika, isu tinokuchengeta iwe uchitumira pawebhu senguva dzose.
Kuti utore iyi vhezheni vhezheni, tsvaga pane zvinyorwa zvekufarira kwako, sezvo yaive yatoverengerwa. Kana iwe uine vhezheni 5.2.6 kana yapfuura, iwe unogona kunongedza zvakananga kunyorera kune ino yazvino vhezheni yeiyi nhevedzano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » FreeOffice 5.2.7 ichave yekupedzisira vhezheni yeOreOffice 5.2.X
Shanduro nyowani hadzisi dzechokwadi chete bugs asi zvakare dzinounza matsva mashandiro… .. asi kusashandisa yekupedzisira kugadzirisa hazvireve kuti kune njodzi kune rako basa pane kushandisa ino, hapana chekuita, unogona kuchengeta basa rako pasina dambudziko….
Ini ndinobvumirana ne PE, kana izvo zvikumbiro zvichida zvinogara zvichishandurwa kuti zvishande pamwe nekuchengetedzeka uye kuvimba ... saka kubva pakutanga kwekumisikidzwa kwechikumbiro chingave chitsotsi .. kutanga kwekutanga kwechero kunyorera (kwete beta chikamu) kuri pachako vimbiso yekushanda. Maonero angu ekuzvininipisa ..
Icho chivimbiso chekushanda kusvikira zvivharo zvekuchengetedza zvikawanikwa izvo zvinogona kuzvikanganisa. Ndicho chikonzero kugadzirisa kunokosha.